बीमा – Page 39 – Banking Khabar
एनबी इन्स्योरेन्सको नाफा २ करोड २० लाख
निजि क्षेत्रको निर्जीवन बीमा कम्पनी एन.बी इन्स्योरेन्स कम्पनीले तेस्रो त्रैमासमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । गत बर्षको सोही अवधिमा कम्पनी ५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको थियो । कम्पनीले जगेडा कोषमा ६ करोड ७ लाख …
ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सको नाफा १३ करोड ३ लाख
निजि क्षेत्रको निर्जीवन बीमा कम्पनी ओरिएन्टल इन्स्योरेन्सले तेस्रो त्रैमासमा १३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्ष तुलनामा ४७.७२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोहि अवधिमा कम्पनीले ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मुनाफा …
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा २ करोड ३२ लाख
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा १८०.६६ प्रतिशतले बढाएको छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा ८२ लाख रुपैयाँ मुनाफा कमाएको कम्पनिले चालू आवको सोही अवधिमा २ करोड ३२ लाख रुपैयाँँ आर्जन गरेको हो । जगेडाकोषमा १४ …
लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्सको नाफा ६ करोड ३७ लाख
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा लुम्बिनी जेनरल इन्स्योरेन्सले ६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनिले गत वर्षको तुलनामा ५७.९३ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ४ करोड ३ लाख …
यस कारण गर्नुस् बिमा : बिमा गर्दाका आठ फाइदाहरु
नेपालमा बिमा क्षेत्रको लामो इतिहास छ । यहाँ बिमा व्यवसाय शुरु भएको ६५ बर्षभन्दा बढि भईसकेको छ । तर एक दशकयता मात्र बल्ल व्यवसायले केही गति लिएको छ । एक दशकयताको अवस्थामा पनि जीवन बिमा गर्नेको सङख्या एकदमै न्युन छ, …
सूर्या, हिमालयन, सिद्धार्थ र नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा कसको नाफा कति ?
सुर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको खुद मुनाफा ५३.३३ प्रतिशतले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १ करोड ५५ लाख नाफा कमाएको कम्पनिले चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६९ लाख रुपैयाँ मात्र नाफा कमाएको हो । जगेडाकोषमा १४ करोड १६ …
शिखर इन्स्यारेन्सको नाफा २० करोड ७२ लाख
चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २० करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनिले गत वर्षको तुलनामा ७१ प्रतिशत बढी नाफा कमाएको हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनिले १२ करोड १२ …
यस्तो छ निक्षेप बिमासम्बन्धि नेपाली प्रावधान
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका करिब सवा १ करोड निक्षेपकर्ताको सवा ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण (बिमा) भएको छ । नेपालमा निक्षेप सुरक्षणको काम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले गर्दै आएको छ । यो एक प्रकारको निक्षेप बिमा हो …
बिमा ‘डिनर’ हो भने पुनर्बिमा ‘डेजर्ट’
प्रा.डा. फत्तबहादुर केसी, अध्यक्ष, बिमा समिति बिमा भनेको सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गरिने र वित्तीय सुरक्षा प्रदान गरिने एउटा संयन्त्र हो । जीवन बिमाले बिमितका परिवारलाई भविष्यमा आउन सक्ने समस्याका लागि वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दछ । साथै यो एउटा बचत पनि …
‘अन द स्पोट’ दुर्घटना विमा !
नेको इन्स्योरेन्स कम्पनिका ग्राहकहरुले दुर्घटना भएपश्चात् विमा दाबीको भुक्तानी लिन लामो समय कुर्नु नपर्ने भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सले अबदेखि दुर्घटना भएको स्थानमै बिमाको दावी भुक्तानी गर्ने भएको हो । कम्पनीले ग्राहकहरुलाई कागजी झन्झटबाट पूर्ण मुक्त भई वीमा दावी सरल …